XOG: Lix Caqabadood oo Farmaajo u dhigay Shirka Teendhada Afisyoone iyo ujeedada ka danbeysa (Akhriso) | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA XOG: Lix Caqabadood oo Farmaajo u dhigay Shirka Teendhada Afisyoone iyo ujeedada...
XOG: Lix Caqabadood oo Farmaajo u dhigay Shirka Teendhada Afisyoone iyo ujeedada ka danbeysa (Akhriso)
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ku dhaqaaqay tallaabooyin cakiray dadaalkii ay Beesha Caalamka waday si shir loogu qabto madaxda maamul Goboleedyada iyo dowladda Federaalka.
Farmaajo oo afar shir oo kadib markii uu muddo xileedkiisu dhammaaday 8-da Febraayo 2021, ku baaqay afar shir oo ay qaadaceen madaxda dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa mar kale isku dayey inuu dhex galo shirka ay qabanqaabineysay Beesha Caalamka, iyadoo halkaas ay ka dhalatay xaalado amni iyo siyaasadeed oo cakiran.
TALLAABOOYINKA FARMAAJO QAADAY WAXAY KALA YIHIIN:
1- Inuu Farmaajo qaatay ku dhawaaqidda xilliga uu dhacayo shirka wadatashiga ee Beesha Caalamka waday, isagoo aan cidna kala tashan, kadib markii uu talo ahaan Wakiilka Q/Midoobay James Swan ugu soo jeediyey dhinacyada inuu furmo 22-ka Maarso 2021.
2- In taliska Ciidamada Booliska ee Garoonka Muqdisho uu hoos geeyay Qeybta Gobolka Banaadir, halka uu ahaa talis heer federaal ah. (Waxaa sidan loo yeelay inay ku shaqeeyaan amarka Saadaq John oo ah sarkaal si gaara daacad ugu ah Farmaajo).
3 In Ciidamo Haramcad ah la geeyay xeydaabka Garoonka Diyaaradaha Muqdisho. Waxaana ciidamo iyo saraakiil ay tageen Teendhada Afisyone ee uu shirku ka dhacayo iyagoo sheegay inay hubinayaan xaaladda Goobta. Arrintan waxay abuurtaykalsooni darro iyo qas dhinaca amniga ah, waxaana ciidamadan oo Khmiistii iyoi Jimcihii la geeyay halkaasi dib loo celiyey shalay.
4- In Saraakiisha Madaxtooyada ay dalbadeen inay ciidamada dowladda qeyb ka noqdaan sugidda xarunta loo qoondeeyay inuu shirku ka dhaco ee Teendhada Afisyone. (Arrintan waxaa ka hor timid AMISOM, waxaana qasab noqotay in wakiilka Midowga Afrika Francisco Madeira uu la hadlo madaxda mucaaradka, xalay saqdii dhexena uu soo saaro damaanad qaad Amniga Garoonka oo dhan).
5- Inay Madaxtooyada faafisay qabyo qoraalka jadwalka shirka wadatashiga ee Beesha caalamka qabanqaabineyso, iyadoo aan weli la isku waafaqin, kaasoo jahawareer ka abuuray baraha bulshada, isla markaana qasbay inay Puntland beeniso, halisna geliyey qabsoomidda shirka maanta.
6- Inuu Farmaajo xalay isugu yeeray madaxda taageersan ee Maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, si ay mowqifkiisa ula qaataan, kana horjeestaan dhinaca kale ee ay is hayaan, halkii xal laga sugayey.
Xogta la helay ayaa sheegeysa in Farmaajo ciyaarayo siyaasad ah inuu abuuro xaalad u diideysa madaxda Puntland iyo Jubbaland inay ka qeybgalaan shirka, kadibna iyagu noqdaan dadka diidan in la shiro ana Doorasho la tago.